प्रेषित १३ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
१३ एन्टिओकको स्थानीय मण्डलीमा भविष्यवक्ता अनि शिक्षकहरू थिए; जस्तै, बर्णाबास, नाइजर भनिने शिमियोन, साइरेनीका लुसियस, अनि मनेन जो प्रान्तीय शासक हेरोदका सहपाठी थिए र शावल। २ उनीहरूले यहोवाको उपासना गर्दै अनि उपवास बसदै गरेको बेला पवित्र शक्तिले भन्यो: “बर्णाबास र शावललाई मैले जुन काम गर्न बोलाएको हुँ, त्यसको लागि तिनीहरूलाई मेरो निम्ति अलग पार।” ३ त्यसपछि उनीहरू उपवास बसे अनि प्रार्थना गरेर बर्णाबास र शावलमाथि आफ्नो हात राखेपछि तिनीहरूलाई पठाए। ४ त्यसैले पवित्र शक्तिद्वारा पठाइएका यी मानिसहरू सिल्युसिया झरे अनि त्यहाँबाट समुद्री यात्रा गरेर साइप्रस गए। ५ त्यहाँ सलामिसमा उत्रेपछि तिनीहरूले यहूदीहरूका सभाघरहरूमा परमेश्वरको वचन प्रचार गरे। तिनीहरूसित यूहन्ना पनि थिए, जसले तिनीहरूको सेवा गर्थे। ६ पूरै टापुमा प्रचार गर्दै पाफोस पुगेपछि तिनीहरूले बार-येशू नाम गरेका यहूदीलाई भेटे, जो तान्त्रिक अनि झूटा भविष्यवक्ता थिए। ७ उनी प्रान्तीय राज्यपाल सर्गियस पौलसकहाँ काम गर्थे। सर्गियस पौलस बुद्धिमान्‌ मानिस थिए र तिनी बर्णाबास अनि शावललाई आफूकहाँ बोलाएर परमेश्वरको वचन ध्यान दिएर सुन्न रुचाउँथे। ८ तर इलुमास तान्त्रिकले (उनको नामको अनुवाद गर्दा यही अर्थ लाग्छ) तिनीहरूको विरोध गर्न थाले अनि प्रान्तीय राज्यपाललाई प्रभुमाथि विश्वास गर्नदेखि रोक्न खोजे। ९ तर शावल, जसलाई पावल पनि भनिन्छ, तिनले पवित्र शक्तिले भरिएर उनलाई एकटक लगाएर हेरे १० र भने: “ए हर किसिमको झूट अनि खराबीले भरिएको मानिस, तँ दियाबलको छोरो अनि हरेक न्यायोचित कामको शत्रु होस्। के तँ यहोवाको सही मार्गलाई बङ्ग्याउन छोड्दैनस्? ११ अब हेर्, तँमाथि यहोवाको हात परेको छ। तँ अन्धो हुनेछस् र केही समय तैंले घामको उज्यालो देख्नेछैनस्।” नभन्दै उनको आँखामा बाक्लो कुहिरो लागेर उनलाई अन्धकारले छोप्यो र उनी आफ्नो हात समातेर डोऱ्याइदिने मानिस खोज्दै छामछाम-छुमछुम गर्न लागे। १२ यो देखेर प्रान्तीय राज्यपालले प्रभुमा विश्वास गरे, किनकि यहोवाको विषयमा सुनेर तिनी दङ्ग परेका थिए। १३ तब पावल अनि तिनीसित गएका अरू मानिसहरू पाफोसबाट जहाज चढेर पाम्फिलियाको पर्गा पुगे। तर यूहन्ना तिनीहरूलाई छोडेर यरूशलेम फर्के। १४ बाँकी अरूचाहिं पर्गाबाट पिसिदियाको एन्टिओक गए र विश्राम-दिनमा सभाघरभित्र पसेर बसे। १५ तब मोशाको व्यवस्था र भविष्यवक्ताहरूको पुस्तक जनसमक्ष पढ्ने काम सिद्धिएपछि सभाघरका पदाधिकारीहरूले तिनीहरूलाई यस्तो सन्देश पठाए: “भाइहरू हो, यदि तपाईंहरूसित मानिसहरूका निम्ति प्रोत्साहनका दुई-चार शब्द छन्‌ भने कृपया सुनाउनुहोस्।” १६ तब पावल खडा भए अनि हातले सबैलाई शान्त हुने इशारा गर्दै यसो भने: “हे भाइहरू, इस्राएलीहरू अनि परमेश्वरको भय मान्ने अरू मानिसहरू हो, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। १७ यस इस्राएली जातिको परमेश्वरले हाम्रा पुर्खाहरूलाई रोज्नुभयो र तिनीहरू मिश्र देशमा प्रवासी भएर बसेको बेला उहाँले तिनीहरूलाई उचाल्नुभयो र आफ्नो बाहुबलले त्यहाँबाट निकालेर ल्याउनुभयो। १८ अनि लगभग चालीस वर्षसम्म उहाँले उजाडस्थानमा तिनीहरूलाई सहनुभयो। १९ कनान देशका सात जातिहरूलाई नाश गरेपछि उहाँले इस्राएलका कुल-कुललाई जमिन बाँडेर दिनुभयो। २० यी सबै कुरा चार सय पचास वर्षको दौडान भएका थिए। “त्यसपछि, भविष्यवक्ता शमूएलको दिनसम्म उहाँले तिनीहरूलाई न्यायकर्ताहरू दिनुभयो। २१ तर त्यसपछि तिनीहरूले राजा मागे। त्यसैले परमेश्वरले बिन्यामीन कुलको कीशका छोरा शावललाई रोज्नुभयो र तिनलाई चालीस वर्षसम्म तिनीहरूको राजा बनाउनुभयो। २२ तिनलाई पदच्युत गरेपछि उहाँले दाऊदलाई तिनीहरूको राजा बनाउनुभयो, जसको विषयमा उहाँ आफैले यस्तो साक्षी दिनुभयो: ‘मैले यिशैको छोरा दाऊदलाई भेट्टाएको छु। ऊ मेरो मन मिल्ने मानिस हो र मैले इच्छा गरेको सबै कुरा उसले पूरा गर्नेछ।’ २३ यिनै मानिसको सन्तानबाट परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञाबमोजिम इस्राएलीहरूलाई एक जना उद्धारक अर्थात्‌ येशू दिनुभयो, २४ जो आउनुभन्दा अघि यूहन्नाले सबै इस्राएलीहरूलाई आफ्ना पापहरूको पश्‍चात्ताप गरेर क्षमा माग्न र त्यसको प्रतीकस्वरूप बप्तिस्मा गर्न प्रचार गरेका थिए। २५ तर आफ्नो सेवाको अन्ततिर यूहन्ना तिनीहरूलाई यसरी सोध्ने गर्थे: ‘तिमीहरू मलाई को भन्ठान्छौ? म उहाँ होइन। तर हेर, एक जना आउँदै हुनुहुन्छ, जसको खुट्टाको जुत्ता फुकाल्न लायकको समेत म छैन।’ २६ “हे भाइहरू, अब्राहामको वंशका सन्तान अनि तपाईंहरूमाझ परमेश्वरको भय मान्ने अरू मानिसहरू हो, उद्धारको यो वचन परमेश्वरले हामीकहाँ पठाउनुभएको छ। २७ तर यरूशलेमका बासिन्दाहरूले अनि तिनीहरूका शासकहरूले उहाँलाई चिनेनन्‌। बरु उहाँको न्याय गरेर उल्टै तिनीहरूले भविष्यवक्ताहरूका ती वचन पूरा गरे, जो हरेक विश्राम-दिनको बेला ठूलो स्वरले पढ्ने गरिन्छ। २८ मृत्युदण्ड पाउन योग्य कुनै कुरा तिनीहरूले उहाँमा फेला पारेनन्‌, तैपनि उहाँलाई मृत्युदण्ड दिन तिनीहरूले पिलातससित माग गरे। २९ यसरी उहाँको विषयमा लेखिएका सबै कुरा तिनीहरूले पूरा गरिसकेपछि उहाँलाई खम्बाबाट तल झारे अनि चिहानमा लगेर राखे। ३० तथापि, परमेश्वरले उहाँलाई मृत्युबाट ब्यूँताउनुभयो। ३१ अनि धेरै दिनसम्म उहाँ ती मानिसहरूसामु देखा परिरहनुभयो, जो उहाँसित गालीलबाट यरूशलेम गएका थिए अनि जसले अहिले उहाँको विषयमा मानिसहरूलाई साक्षी दिइरहेका छन्‌। ३२ “त्यसैले हाम्रा पुर्खाहरूसित गरिएको प्रतिज्ञासित सम्बन्धित यो सुसमाचार हामी तपाईंहरूलाई सुनाउँदैछौं: ३३ येशूलाई पुनर्जीवित गरेर परमेश्वरले तिनीहरूका सन्तान अर्थात्‌ हाम्रो निम्ति त्यो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुभएको छ, जस्तो दोस्रो भजनमा पनि लेखिएको छ, ‘तिमी मेरो छोरा हौ। म आज तिम्रो बुबा बनेको छु।’ ३४ परमेश्वरले उहाँलाई मृत्युबाट पुनर्जीवित पारेर फेरि कहिल्यै कुहिन नदिने निश्चय गर्नुभएको छ, जुन उहाँले भन्नुभएको यो वचनबाट पनि प्रस्ट हुन्छ, ‘म वफादार भई तिमीहरूलाई दया देखाउनेछु, जसबारे मैले दाऊदसित प्रतिज्ञा गरेको थिएँ।’ ३५ तसर्थ, अर्को भजनमा उहाँ यसो पनि भन्नुहुन्छ, ‘तपाईंले आफ्नो वफादार जनलाई कुहिन दिनुहुनेछैन।’ ३६ एकातर्फ, जहाँसम्म दाऊदको कुरा छ, तिनले आफ्नो पुस्तामाझ परमेश्वरको इच्छा पूरा गरे अनि मृत्युको चिर निद्रामा परे। तिनी आफ्ना पुर्खाहरूसित गाडिए र तिनी साँच्चै कुहिनुपऱ्यो। ३७ तर अर्कोतर्फ, जसलाई परमेश्वरले ब्यूँताउनुभयो, उहाँ भने कुहिनु परेन। ३८ “त्यसैले हे भाइहरू, तपाईंहरूलाई यो कुरा थाह होस्, यही येशूद्वारा पापको क्षमा पाउन सकिन्छ भनेर हामी तपाईंहरूलाई प्रचार गर्दैछौं। ३९ अनि ज-जसले येशूमाथि विश्वास गर्छन्‌, तिनीहरू सबै मोशाको व्यवस्थाले निर्दोष साबित गर्न नसक्ने कुराहरूबाट निर्दोष साबित हुनेछन्‌ भनेर पनि हामी प्रचार गर्दैछौं। ४० त्यसैले होसियार हुनुहोस् नत्र त भविष्यवक्ताहरूको पुस्तकमा लेखिएको यो वचन तपाईंहरूमाथि आइपर्नेछ: ४१ ‘हे खिसी गर्ने अनि ताजुब मान्नेहरू हो, मेरो काम हेर अनि बिलाएर जाओ, किनकि तिमीहरूको समयमा म यस्तो काम गर्दैछु, जुन कामको विषयमा कसैले सविस्तार बतायो भने पनि तिमीहरूले कदापि विश्वास गर्नेछैनौ।’ ” ४२ अनि तिनीहरू सभाघरबाट बाहिर निस्किरहेको बेला मानिसहरूले अर्को विश्राम-दिनमा ती कुराहरू फेरि सुनाइदिन आग्रह गर्न थाले। ४३ सभाघरको सभा विसर्जन भएपछि धेरै यहूदीका साथै धर्म परिवर्तन गरेर यहूदी भएकाहरू, जसले परमेश्वरको उपासना गर्थे, तिनीहरू पनि पावल र बर्णाबासको पछि लागे। तब तिनीहरूले उनीहरूसित कुराकानी गरे र परमेश्वरको असीम अनुग्रह पाउन योग्य भइरहन प्रोत्साहन दिए। ४४ यहोवाको वचन सुन्न अर्को विश्राम-दिनको बेला लगभग पूरै सहर उर्लिएर आयो। ४५ मानिसहरूको भीड देखेर यहूदीहरू डाहले भरिए अनि पावलले भनेका कुराहरूको खण्डन गरेर तिनीहरूले परमेश्वरको निन्दा गरे। ४६ तब पावल र बर्णाबासले साहसी भएर यसो भने: “परमेश्वरको वचन सर्वप्रथम तपाईंहरूलाई सुनाउनु आवश्यक थियो। तर तपाईंहरूले त्यसलाई इन्कार गर्नुभयो र आफैलाई अनन्त जीवन पाउन अयोग्य साबित गर्नुभयो। त्यसैले हेर्नुहोस्, अब हामी अन्यजातिका मानिसहरूकहाँ जाँदैछौं। ४७ भनौं भने, यहोवाले हामीलाई यस्तो आज्ञा दिनुभएको छ, ‘मानिसहरूको उद्धार गर्ने मेरो माध्यमबारे पृथ्वीको कुना-कुनासम्म गएर घोषणा गर्न मैले तिमीलाई जाति-जातिका मानिसहरूको ज्योति नियुक्त गरेको छु।’ ” ४८ यो कुरा सुनेर अन्यजातिका मानिसहरू रमाए अनि यहोवाको वचनको प्रशंसा गर्न थाले। साथै, ज-जससित अनन्त जीवन पाउन लायकको उचित मनसाय थियो, तिनीहरू सबैले प्रभुमा विश्वास गरे। ४९ यसबाहेक यहोवाको वचन पूरै देशभरि फैलँदै गयो। ५० तर यहूदीहरूले परमेश्वरको उपासना गर्ने गण्यमान्य स्त्रीहरू अनि सहरका मुख्य-मुख्य पुरुषहरूलाई भड्काए। उनीहरूले पावल र बर्णाबासको खेदो गरे अनि तिनीहरूलाई सहरबाहिर धपाए। ५१ तर तिनीहरूले आफ्नो पैतालाको धूलो टकटकाए* अनि आइकोनियम गए। ५२ तब चेलाहरू रमाहट अनि पवित्र शक्तिले भरिपूर्ण भइरहे।
^ प्रे १३:५१ * मत्ती १०:१४ को फुटनोट हेर्नुहोस्।